Kala bedel Kursiga gacmaha, Kabaha : Horumarinta (-55%)
Ma waxaad raadineysaa dalab qani ah oo ballaaran oo ku saabsan noocyada ugu caansan iyo kuwa soo saarayaasha ah?
Maanta dadku waxay dareen badan u leeyihiin ma ahan oo keliya muuqaalkooda, laakiin ka sarreeya dhammaan kuwa kaleba. Dad badan iyo dad badan ayaa ka warhaya waxa dharka ay iibsadaan iyo nooca dharka ay u xiran yihiin si rasmi ah ama u shaqeeyaan, shirarka dugsiga ama ganacsiga. Si loola kulmo waxyaabaha laga filayo macaamiisheena kuwaas oo doonaya inay dhar gashadaan, dhar qaali ah oo ka soo jeeda caalamka, waxaan abuuray dukaanno casri ah oo shaqeynaya oo dib u habeyn ah.
Waxaad ka heli kartaa waxa ugu caansan ee kabaha, dharka iyo bacaha, laakiin dalabkeena waa mid aad u ballaaran. Waxaan sidoo kale bixinnaa xaashida jeebka, nuqulada dahabka iyo saacadaha; Dhammaantood waxay ku dhasheen naqshad casri ah, muuqaal jilicsan oo ay ka samaysan yihiin qalabka tayada ugu sarreeya. Daryeelidda heerarka sare ee kaabayaasha la bixiyay ayaa noo ogolaanaya in aan iibino oo kaliya alaabooyinka lagu kalsoon yahay oo la tijaabiyey, taas oo gabi ahaanba aan siinin asalka, iyo marka laga reebo taas, way ka jaban yihiin iyaga.
Haddii aad xiiseyneyso qorshahayaga oo aad jeclaan lahayd inaad soo booqato dukaamo xirfad leh oo lagu qadariyo oo leh kabaha, dharka ama dahabka, waxaan kugu martiqaadeynaa inaad soo booqato websaydheena https://get2lux.cn/en/
Qaar ka mid ah ma aysan jiri Karin, halka kuwo kale aysan ka fakari karin inay guriga ka baxaan iyaga oo aan lahayn, gaar ahaan cimilada qorraxda. Muraayadaha sanbabadu waxay hadda yihiin mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan xiranahay - midigta ku xigta boorsooyinka ama dahabka. Waxaan go'aansanay inaan ka soo baxno rajada ka jirta kumanaanka Poleska iyo in la abuuro dukaanka muraayadaha muraayadaha qoraallada ee la yaqaan, ugu horreyntii Ray Ban, Versace iyo Gucci.
Replicas waxay ku dhow yihiin kuwa aan asal ahaan ka soo jeedin asalkooda - ku saabsan aragtida, halka farqiga u dhaxeeya aan la garan karin, iyo sidoo kale arrimaha farsamada, sidaas darteed nooca iyo tayada qalabka loo isticmaalo. Taasi waa sababta, marka aad iibsanayso muraayadaha indhashareerka muraayadaha, ama Prada, Louis Vuitoon, ama Chloe, waxaad heleysaa shey si siman u ah asalka dhinac walba. Iyada oo kaliya hal farqiga - waa mid aad u jaban, si fudud loo heli karo, iyo u fududaan kartaa boorsada iyo awooda ee celceliska isticmaala Polish.
Bixinta dukaankayaga, waxaad ka heli kartaa, oo ka mid ah kuwa kale, Bvlgari qotoda ah, qaababka LV ama Celine
Boorsada ayaa loo yaqaanaa inay muhiim u tahay haweenka tan iyo ugu yaraan qarnigii shanaad ee BC. Maanta, in ka badan laba kun iyo shan boqol oo sano kadib, waxay ka ciyaaraan door muhiim ah. Dumarku, si kastaba ha ahaatee, ma aha oo kaliya inay qaataan cirbadaha asalka ah, laakiin sidoo kale waxay gaari karaan waxyaabo ay ka mid yihiin naqshadaha gacmaha iyo naqshadayaasha caalamka oo dhan. Sababta waa cad yahay: qiimo hoose oo tayo leh.
Qaar ka mid ah naqshadaha ugu caansan ee dumarka Polish ayaa ka yimaada naqshadeeyayaasha sida Louis Vuitton, Burberry iyo YLS, laakiin magaca Louboutin ee Christian Louboutin, Dioraha iyo Chloe ayaa sidoo kale xiiso weyn leh. Haweenka reer Poland waxay jecelyihiin in ay doortaan mabaadi 'caan ah oo ku caan ah Mareykanka ama ay ka soo baxeen mahadnaqa dhiirigelinta xiddigaha hollywood, caanaha cayaaraha iyo xataa siyaasadda. Dalabkeena waxaa sidoo kale ku jira noocyada kale ee jaangooyooyinka ee noocyada kale; waxaa ka mid ah moodooyinka laga helo Hermes, Gucci, Prada, Chanel, Celine, iyo ugu dambayntii dalabka ayaa la kordhiyay iyadoo la sii marinayo kariimka boorsada Valentino.
Haddii aad rabto in aad ogaatid noocyo badan oo la heli karo, fadlan booqo bartayada internetka https://get2lux.cn/en/119-handbags Ma fududa inaad iibsato jaakad hufan, taas oo ka muuqan doonta duruusta maaddada, qaabka gaarka ah, muuqaalka gaarka ah iyo, isla mar ahaantiis, sicirka qiimo jaban. Dhammaan sifooyinkaa waxaa laga heli karaa xaashiyo jeebka ah oo ah noocyo caan ah oo caan ah oo aan ku bixinno dukaankeenna. Ficil ahaanba kama duwana asalka marka hore; labadaba waa la jaray, lafdhabarta, cabbirka, iyo sidoo kale sifooyin gaar ah, waxay u dhigmaan asxaabta ay ka heleen boutiques caan ah. Mana aha arrin muhiim ah haddii ay tahay dib u soo celinta Louis Vuitton, Chanel ama celine jeebka - mid kasta oo ka mid ah ayaa lagu kala duwan yahay tayada sare ee alaabta lagu sameeyey iyo damaanad qaadka ka soo jeeda dhinaca. Replicas waa fikrad fiican oo loogu talagalay deeq aan qaali ahayn, balse waa hadiyad gaar ah oo loogu talagalay macalinka ama asxaabteeda, isla markaana waxay si siman u fuliyaan hawshooda waxqabadka sanado badan oo joogto ah. Dalabkayagu aad ayuu u ballaaran yahay: waxay ka kooban tahay nuqul ka mid ah jadwalka mashiinka Gucci iyo moodooyinka Burberry, YSL iyo boorsooyinka ugu caansan ee Christian Louboutin.
Ma fududa inaad iibsato jaakad hufan, taas oo ka muuqan doonta duruusta maaddada, qaabka gaarka ah, muuqaalka gaarka ah iyo, isla mar ahaantiis, sicirka qiimo jaban. Dhammaan sifooyinkaa waxaa laga heli karaa xaashiyo jeebka ah oo ah noocyo caan ah oo caan ah oo aan ku bixinno dukaankeenna.
Ficil ahaanba kama duwana asalka marka hore; labadaba waa la jaray, lafdhabarta, cabbirka, iyo sidoo kale sifooyin gaar ah, waxay u dhigmaan asxaabta ay ka heleen boutiques caan ah. Mana aha arrin muhiim ah haddii ay tahay dib u soo celinta Louis Vuitton, Chanel ama celine jeebka - mid kasta oo ka mid ah ayaa lagu kala duwan yahay tayada sare ee alaabta lagu sameeyey iyo damaanad qaadka ka soo jeeda dhinaca. Replicas waa fikrad fiican oo loogu talagalay deeq aan qaali ahayn, balse waa hadiyad gaar ah oo loogu talagalay macalinka ama asxaabteeda, isla markaana waxay si siman u fuliyaan hawshooda waxqabadka sanado badan oo joogto ah.
Dalabkayagu aad ayuu u ballaaran yahay: waxay ka kooban tahay nuqul ka mid ah jadwalka mashiinka Gucci iyo moodooyinka Burberry, YSL iyo boorsooyinka ugu caansan ee Christian Louboutin.
Haddii aad waligaa ku riyootay inaad xirato kabo qurxoon oo casri ah oo ay wehliso dad caan ah, xiddigo iyo jilayaal ka socda adduunka oo idil, isla markaana isla markaa tagin bakhaarka marka aad iibsanaysid kabahaas, markaa dukaanku waa xalka ugu fiican ee aad walaacsan tahay . Iskuduwaha Louis Vuitton, Gucci, Dior, Yeezy, Converse Coca & Cola, Kaniisada, Christian Louboutin iyo noocyo kale oo badan ayaa ah saldhigga noocyadeena, kaas oo sidoo kale ku xiran naqshadeeyayaasha nuugaya.
Dukaanka yaryar ee YLS, oo lagu iibiyo dukaanka, Isabel Marant ama kabaha Hermes ayaa si taxadar leh loogu soo xulay qaababka laga soo ururiyay adduunka oo laga heli karo suuqa; qaabab la caddeeyey, muuqaal iyo caan ah oo ku guuleystay taageerayaasha adduunka oo dhan iyo waa in nuqulkiisa ku jira dhar kasta oo casri ah casri ah.
Ka fiiri dukaamadayada dukaamada Dior, Chanel iyo Gucci kabaha ku jira https://get2lux.cn/en/113-boots link - waxaan kuu xaqiijineynaa qiimaha soo jiidashada, bixinta degdegga ah iyo xaaladaha cad ee macaamilka. Iibsashada calaamadaha kabaha waa fursad gaar ah oo loogu talagalay dadka raba in ay u eegaan moodada iyo casriga, isla mar ahaantaana ay ku qanacsan yihiin raaxada socodka iyo xajmiga loo balan qaaday kabaha ka soo rayn raasumaalka ugu sarreeya.
link - waxaan kuu xaqiijineynaa qiimaha soo jiidashada, bixinta degdegga ah iyo xaaladaha cad ee macaamilka. Iibsashada calaamadaha kabaha waa fursad gaar ah oo loogu talagalay dadka raba in ay u eegaan moodada iyo casriga, isla mar ahaantaana ay ku qanacsan yihiin raaxada socodka iyo xajmiga loo balan qaaday kabaha ka soo rayn raasumaalka ugu sarreeya.
Markaad go'aansato inaad soo iibsato dharka dharka, waxaa habboon in la ogaado nooca nooca iyo naqshadeeyayaasha inay yihiin kuwo la moodi karo xilligan xaadirka ah, kuwaas oo iyaga ka mid ah "xiran" oo dharkeeda ay ka fiican tahay dib u dhigista wakhtiyada ka wanaagsan. Badeecadaha aan bixinno waa moodo, casri ah oo la jaanqaadaya isbeddelada hadda jira. Kuwani waa kuwa ugu muhiimsan sida noocyada Gucci, Chanel, Dolce & Gabbana, Hermes iyo YSL, inkasta oo soo jeedinta guud ay sii socoto oo ay ku jiraan dharka kuwa wax soo saarka yar.
Markaad ka iibsato alaabta dharka ah ee alaab-qeybiyaha aaminka ah, waxaad hubsan kartaa inaad heli karto badeeco la tijaabiyey, la xaqiijiyay oo ka timaadda ilo sharci ah oo aan ku xadgudbin danaha asaasiga ah laftiisa. Dharka ayaa laga heli karaa dalabkayaga, tusaale ahaan, noocyada Chanel, Burberry ama Balenciaga waa uun waxyaabahan oo kale: Ma aha oo kaliya kuwo aad u muuqda, ma ahan kuwo keliya oo dabacsan, laakiin sidoo kale waxay marqaati u yihiin qaabka iyo fasalka milkiilahooda. Tani waa beddel fiican oo asal ahaan qaali ah, ma aha oo keliya marin la heli karin jeebka caadiga ah, laakiin badanaa lagama helin suuqa Suuqa iyo dukaamada Polish.
Wixii macluumaad dheeraad ah ee ku saabsan soo jeedinta dhejiska dharka, fadlan booqo
Noocyada kala duwan ee laga heli karo suuqa dahabiga ah ayaa dooranaya noocyada gaarka ah ee fudud, laakiin kaliya haddii aan ogaano waxa aan raadineyno iyo nooca cagaarka ama giraanta aan dooneyno inaan xirtano. Muddadii dhowaan, Poland, jewelery jewelery ee sumadaha caan ah, saxiixay magacyada si fiican loo yaqaan sida Chanel, Dior, Tiffany ama Louis Vuitton noqday mid la yaab leh.
Taasi waa nooca dahabiga ah ee aad ka heli doonto dukaanka - khaas ah, casri ah, xarrago leh, iyo qiimo aad u fiican ee qiimaha qiimaha. Haddii aad rabto in aad hubiso in foomka Chanel ee aad soo iibsatay uu kuu adeegi doono muddo tobanaan sano ah, ma heli doono waxyeello, ma boodi doono, mar walbana mar walba iftiimin doono xaaladaha - dooro dalabkayaga.
Waxaa laga heli karaa dalabka ballaadhan, joornaalada dahabka ee Louis Vuitton, Cartier ama Hermes waa badeecooyinka fasalka ugu sarreeya, loogu talagalay oo lagu soo saaro dadka qiimeeya fashion, muuqaal xarrago leh iyo sharaf, kaas oo dahab ah oo dammaanad qaadaya inta lagu jiro ganacsiga ama shirarka bulshada, iyo sidoo kale sarkaal dhacdooyin.
Ha sugin wax intaas ka badan, fiiri dukaankeena hada
Inkastoo saacadaha shakhsiyadeed ee caadiga ah si tartiib tartiib ah loogu riixo saacadaha telefoonada gacanta, weli waxaa jira dad badan oo si farxad leh u xirxiraya daawashada curcurka. Gaar ahaan moodooyinka kuwaas oo caan ku ah soo saarayaasha caan ah iyo magac caan ah. Uma baahnid inaad iibsato asalka si aad uga heshid tayadooda; waxay ku haboon yihiin in ay daawadaan cajalado, laakiin kaliya haddii ay la sameeyaan qalabka saxda ah iyo ilaalinta tayada ugu sareysa, si aysan u muuqan wax muuqaal ah oo ka muuqda sawirada dhabta ah.
Haddii aad eegto dukaankeenna dukaanka, waxa aad ka heli doontaa bandhig balaadhan oo ballaadhan oo loogu talagalay qof walba, iyo munaasabad kasta. Sicirada jimicsiga waxay naga dhigaan dalabkayaga oo dhan oo macaamiisha ah, iyada oo aan loo eegin qoto dheer ee jeebka ama kaararka deynta. Mid ka mid ah saacadaha ugu caansan iyo kuwa ugu caansan ee ay iibsadaan macaamiishu waa Emporio Armani nuqul ka mid ah, taas oo lagu kala duwan yahay xitaa faahfaahinta xitaa faahfaahinta ugu yar ee dhamaystiran.
Waxaan kugu martiqaadeynaa inaad ku baratid dalabkeena buuxa ee bogga internetka https://get2lux.cn/en/127-waxaa